MUDI DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Mudi Dog Macluumaadka iyo Sawirada
'Qiiqa Quetzalcotl, Mudi waa 2 jir cirro leh. Mudik aad ayuu u dhakhso badan yahay wuxuuna u baahan yahay qol badan oo uu ku ordo. Mudik waa nooc adag oo loo dhaqdo adhiga, doofaarrada iyo lo'da. '
Mudi wuxuu leeyahay madax qaab eg oo duuf leh oo sankiisu fiiqan yahay. Daamanku waa muruqyo leh maqas qaniinaan. Qalfoofku waa jajabnaan leh joogsi calaamadeysan. Indhuhu waa oval iyo bunni madow. Dheguhu waxay ku taagnaayeen qaab u eg 'V'. Waxay leedahay gun dheer. Maaha wax aan caadi ahayn in eeyadu dhasho bilaa dabada. Dhabarku waa toosan yahay oo waa dheer yahay. Lugaha dambe ayaa si layaab leh loo dhigay. Timaha xuubka ayaa gaagaaban, oo u biiraya dhinaca dhagaha. Cufnaantiisa, duufaankeeda ilaa jaakaddiisa ayaa dhererkeedu yahay 2 inji (5 cm) oo leh timo dhalaalaya oo sameeya tufaaxyo oo sahlan in la daryeelo. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah madow, cadaan, casaan, bunni, cawl, roodh-cirro iyo fallow. Waxa kale oo jira midab aad dhif u ah oo loo yaqaan 'cifra' (buluug-merle), kaas oo ah mugdi ama khafiif khafiif ah oo lagu qasan yahay midab madow, midab leh, midab leh, midab leh, midab leh. (Midabada jaakad ee suurtogalka ahi dhab ahaantii waa kuwo aan xad lahayn oo leh noocyadan.)
Mudi runtii waa eey naadir ah. Milkiilayaasha yar ee shaqaaleeya ee u xagliya Mudi waxay u arkeen isaga inaan lala barbardhigi karin. Liiskiisa umuuqda mid aan dhamaanayn ee hibada oo ay weheliso dabeecaddiisa wacan ayaa isaga ka dhigaysa eey sare oo ka mid ah hareeraha. Caqli sare, Mudi wuxuu baran karaa sida ugu dhakhsaha badan a Soohdinta Collie ama xitaa dhakhso badan. Aad iyo aad u xoog badan oo geesinimo leh, Mudi wuxuu ka baqayaa waxba, xitaa xayawaanka duurjoogta ah, ee ay si dhakhso leh uga adkaan karto. Waxay ka dhigtaa eey waardiye wanaagsan. Waa mid aad u jecel oo jilicsan qoyska dhexdiisa sidaa darteedna waxay ku heshay qadarin sida eey wehel ah oo haddii loo baahdo difaaci doona hantida iyo qofkaba. Qoyska dhexdiisa sidoo kale waxay u janjeeraa inay ku xirnaato qof gaar ah. Mudik wuu ka digtoonaan karaa shisheeyaha. Bulsho iyaga si fiican, doorbidayaa da'da yar. Qaarkood uma imaan doonaan qof shisheeye ah illaa ay ka arkaan inuu qofku saaxiibtinimo leeyahay oo uusan doonaynin inuu waxyeelleeyo. Iyagu ma ahan kuwa dagaal badan markay la kulmaan qof aysan garanayn inay u baahan yihiin oo keliya inay la qabsadaan iyaga. Way ku fiicnaan doonaan carruurta haddii loola dhaqmo si ay wax u arkaan aadanaha iyaga kor ku xusan ee xirmo xirmo . Mudik saaxiibtinimo ayuu la leeyahay eeyaha kale wuuna ku fiicnaan doonaa xayawaanka aan xayawaanka ahayn haddii iyaga laga soo koriyey eey ama si habboon loogu keenay sidii xayawaan cusub oo guriga ku jira. Waa adeecsan iyo wehel wada ciyaar ah, laakiin mararka qaarkood buuq buuq karaa. Waxay u baahan yihiin in la baro inaysan u ciyin si aan loo baahnayn. Mudik wuxuu si fiican ula shaqeyn doonaa shaqo uu qabto. Waxay u baahan yihiin milkiile yaqaan sida loo yaqaan si habboon ula xiriir xeerarka iyo mid waqti u haya jimicsi maalinle ah.
Dhererka: 14 - 20 inji (38 - 47 cm)
Miisaanka: 18 - 29 rodol (8 - 13 kg)
jack russell shih tzu qas eeyo
Tani waa nooc caafimaad oo caadi ah, in kasta oo xaaladaha qaarkood ee dysplasia sinta ay dhacday, laakiin ma badna.
Mudi wuxuu ku noolaan karaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado si kastaba ha noqotee, wuxuu u baahan yahay meel uu ku ordo oo uu ku ciyaaro waana ka fiicnaan lahaa haddii aan lagu sii haysan. Noocani waa mid dhex dhexaad firfircoon ka shaqeeya wuxuuna ku fiicnaan doonaa ugu yaraan daarad weyn. Noocani wuxuu ku noolaan karaa banaanka.
Mudi waa nooc aad u firfircoon. Waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta, dheer, deg deg ah soco ama jog, halkaas oo eeyga looga sameeyo ciribta dhinac ama gadaashiisa bini'aadanka haysta xarigga, sida indhaha eeyaha oo kale, hogaamiyaha baakadka ayaa hogaaminaya wadada. Intaas waxaa sii dheer, eeygaagu wuxuu ka faa'iideysan doonaa aag ballaaran oo nabdoon oo uu si xor ah ugu socon karo. Mudik wuxuu u baahan yahay orod fara badan iyo layliyo kale si uu xaaladdiisa ugu fiicnaado. Waxay jecel yihiin inay ciyaaraan oo waxay ku fiicnaan doonaan dhammaan noocyada isboortiga sida Flyball iyo Frisbee.
Qiyaastii 13-14 sano
Muudku si fudud ayaa loo hagaajiyaa. Shanlaab mar mar ah iyo cadayasho si looga saaro timaha dhintay ayaa ah waxa kaliya ee ay u baahan tahay. Noocani waa celcelis daadiya.
Magaca Mudi oo buuxa waa Canis Ovilis Fenyesi (Dr. Dezso Fenyesi ayaa Mudi ka soocay Puli iyo Pumi). Eyda reer guuraaga ah eeyaha u ah eeyaha ayaa dhammaantood si wada jir ah loo sifeeyay illaa 1930-meeyadii, markii Mudi laga soocay Puli iyo Pumi . Noocan ujeedada leh ee reer miyiga ah uma muuqato natiijada taranka la qorsheeyay. Nooca ayaa si iskiis ah u sameysmay wuxuuna qiyaastii yahay boqol sano. Waa dhif iyo naadir, xitaa Hangari - waddankeeda asalka ah. Isbadalkeeda waxay xasilisay horaantii 1900 meeyadii heerarkeedana waxaa lagu qoray iyadoo loo eegayo astaamahan asalka ah. Waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah sababaha cuncunkan loo aanayn karo weligiis-xaadirka ah Puli iyo Komondor - Noocyada ka shaqeeya uguna caansan Hungary. Waxaa laga yaabaa inay tahay tan ugu yar ee la ogyahay eeyaha Hungary oo dhan, waxaa lagu xusay badnaanta adeegsigeeda gudaha iyo dibaddaba dalkooda hooyo. Waxay u adeegtay sidii ilaaliye adhi, adhi daajiye, lo 'dhaqato, eey waardiye ah, ugaadhsade xayawaanka duurjoogta ah, dilaa jiir iyo weas iyo wehel. Wuxuu awood u leeyahay inuu maareeyo adhigiisa isaga oo aan ka helin caawimaad saddexaad. Finland waxaa loo isticmaalaa inay yihiin eeyo badbaadiya buuraha. Faragelin la'aan kalkaaliyeyaal u heellan, ayay ku jiri lahayd khatarta baabi'inta .
isku darka chihuahua mini australia
'Erika de la Croix Bernifa waxay ku dhalatay Belgium waxaana la keenay Mareykanka 2006. Waxay sugeysaa tii labaad qashin eeyo yaryar bishii Ogos ee 2009. Waxaa jiray in ka yar 10 qashin oo ah Mudi Ey yaryar oo ku dhashay Mareykanka 10-kii sano ee la soo dhaafay. Waxaa lagu muujiyay sawirkan seddex ka mid ah lixdeeda eey. '
Tani waa Savvy oo jirta 9 bilood. Lahaanshaha sawirka Linda Reynolds, VerMudi Kennel
Racey wuxuu u egyahay boqortooyo caws — kani waa Savvy aabihiis Si dhakhso ah waa hooyada. Lahaanshaha sawirka Linda Reynolds, VerMudi Kennel
Ku xariir cunugga Mudi ee 7 toddobaad jira. Lahaanshaha sawirka Linda Reynolds, VerMudi Kennel
Mudis, Maia iyo Forras
Maia the Mudi
Eeg tusaalooyin badan oo Mudi ah
Mudi Sawirada 1
Jack russell terrier chihuahua mix puppy. '
Sawirro buro unugyada feerka
saint bernard isku dane weyn
7 wiig jir feeryahan ah
bar bar bulldog Faransiiska Boston Pit
xiisaha of terriers Staffordshire Maraykanka
shih tzu iyo iskudhafka schnauzer